12 အကောင်းဆုံး ပထမအကြိမ် ခရီးသွားများ၏ တည်နေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > 12 အကောင်းဆုံး ပထမအကြိမ် ခရီးသွားများ၏ တည်နေရာများ
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
အဆင်ပြေတယ်။, လမ်းလျှောက်နိုင်သော, ပြီးတော့လှတယ်, ဤ 12 အကောင်းဆုံး ပထမခရီးသည်များ’ တည်နေရာများသည် ဥရောပတွင် သွားရောက်လည်ပတ်ရန် အကောင်းဆုံးမြို့များဖြစ်သည်။. ရထားနဲ့ တည့်တည့်, Louvre သို့, သို့မဟုတ် Dam Square, ဤမြို့များသည် တစ်နှစ်ပတ်လုံး ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား သန်းပေါင်းများစွာကို ဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။, ဒါကြောင့် မင်းရဲ့အိတ်တွေကို ထုပ်ပိုးပြီး သူတို့ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ ခရီးမှာ ငါတို့နဲ့ ပူးပေါင်းလိုက်ပါ။.
1. အကောင်းဆုံး ပထမအကြိမ် ခရီးသွားများ၏ တည်နေရာများ: အမ်စတာဒမ်
စနေ၊, အမ်စတာဒမ်၏တစျခုဖွစျသညျ 12 ပထမဆုံး ခရီးသွားများအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာများ. အမ်စတာဒမ်သည် အတော်လေးသေးငယ်သည်။, သွားလာရလွယ်ကူစေသည်။, သို့မဟုတ် စက်ဘီးဖြင့်. ဖြည့်စွက်ကာ, ဤခရီးလမ်းသည် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်သို့သွားခြင်း သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားဘာသာစကားဖြင့် ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းမပြုသော ပထမခရီးသည်များအတွက် ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။.
ထို့ကြောင့်, သာအတွက်3ချစ်စရာကောင်းသော ဒတ်ခ်ျမြို့တော်ရှိ တူးမြောင်းနှင့် ထောင့်တိုင်းကို နေ့စဥ်လေ့လာနိုင်သည်။. Demark ရှိ Gingerbread အိမ်များ, ဆည်ရင်ပြင်, ပန်းဈေးကွက်, တူးမြောင်းတစ်ခုပေါ်ခုန်တက် လှေခရီးစဉ်, နှင့် Anne Frank အိမ်, သင်သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သော နေရာအချို့သာဖြစ်သည်။. ဤသည်မှာ ရှည်လျားသော ပုံးစာရင်းတစ်ခုလိုပင်, မြို့တော်၏ဒီဇိုင်းသည် ဤလှပသောနေရာများနှင့် လိုက်ဖက်မှုရှိသောကြောင့် လာရောက်လည်ပတ်သူတိုင်း အားလပ်ရက်တိုတိုအတွင်း ၎င်းတို့အားလုံးကို လာရောက်လည်ပတ်နိုင်ပါသည်။. ဒတ်ခ်ျလူမျိုးများသည် ဖော်ရွေပြီး အလွန်ကြိုဆိုကြပြီး ၎င်းတို့၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် မြို့တော်ကို သင်နှင့် မျှဝေရန် ပျော်ရွှင်နေပါသည်။.
သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်: မေ, နာမည်ကြီး ပန်းဈေးကွက်အတွက်.
အံ့ဖွယ်တံတားများမြို့, ဘီယာဥယျာဉ်များ, ပရာ့ဂ်သည် ပထမအကြိမ် ခရီးသွားများအတွက် ကောင်းမွန်သော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။. ပရာ့ဂ်ကို မရောက်ဖူးရင်, ပျော်စရာမြို့ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။, အထင်ကြီးစရာ, အသက်ဝင်သည်။. အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ အသင်းတော်တွေအပြင်, နှင့် မြို့ဟောင်းရင်ပြင်, ပရာ့ဂ်သည် ပိတ်ရက်တိုတိုအတွင်း အားလပ်ချိန်အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သည်။, အရက်ဆိုင်များနှင့်, ကလပ်များ, ညနေပိုင့်အတွက် ဘီယာဥယျာဉ်များ.
ထို့အပြင်, မြို့သည် ခရီးသွားများ ကြွားဝါသည်။, ဒါကြောင့်, ပရာ့ဂ်ကို တစ်ယောက်တည်း ခရီးသွားရင်, တခြားခရီးသည်တွေနဲ့ အမြဲတွေ့ဆုံနိုင်ပါတယ်။. ဤနည်းဖြင့် သင်သည် လာမည့်ဥရောပခရီးစဉ်ကို အစီအစဉ်ဆွဲရန် စိတ်အားထက်သန်လာနိုင်သည်။, Vienna သို့မဟုတ် Paris သို့, ဘယ်ဟာတွေလဲ။ ရထားခရီးဝေး.
ဥရောပကို ပထမဆုံးအကြိမ် ခရီးထွက်ဖို့ စဉ်းစားတဲ့အခါ, လန်ဒန်ကို မလွှဲမရှောင်သာ သတိရလာသည်။. မြို့သည် အံ့သြဖွယ်ရာ ယဉ်ကျေးမှုများ ရောနှောနေပါသည်။: အင်္ဂလိပ်အမွေအနှစ်များနှင့် ခေတ်မီခေတ်မီသော ရပ်ကွက်များ, London Eye နှင့် Buckingham နန်းတော်. အရာရာကို မြင်ဖို့ ခက်နေပေမယ့်, လန်ဒန်မှာ သီတင်းပတ်ကုန် ကမ်းလှမ်းဖို့ ရှိပါတယ်။, ဂန္တဝင် လန်ဒန်သို့ ခရီးတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။.
Classic London တွင် Buckingham နန်းတော်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်း ပါဝင်သည်။, လန်ဒန်မျှော်စင်, နှင့် Kensington Gardens, ၏အနည်းငယ် ဥရောပရှိ အကောင်းဆုံးမှတ်တိုင်များ. ဖြည့်စွက်ကာ, West End တွင် ဂီတကို သင်ခံစားနိုင်သည်။, Notting Hill တဝိုက် လှည့်လည်, ပြီးတော့ အင်္ဂလိပ်မနက်စာ မြည်းစမ်းကြည့်တာပေါ့။. အဓိကအချက်, လန်ဒန်သည် ပထမဆုံး ခရီးသွားများအတွက် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။.
သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်: နွေနှင့်နွေ, ကောင်းကင်ပြာပြာနှင့် ရာသီဥတုပူသောအခါ.
4. အကောင်းဆုံး ပထမအကြိမ် ခရီးသွားများ၏ တည်နေရာများ: သုံးဘီး
ကြွယ်ဝသောအနုပညာသမိုင်း, ခမ်းနားသောမှတ်တိုင်များ, ဘုံဗိမာန်များ, Florence သည် အနုပညာချစ်သူများအတွက် အံ့သြဖွယ် ပထမဆုံး ခရီးသွားနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။. မြို့လယ်ခေါင်သည် Florence ၏အကျော်ကြားဆုံးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။, ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော Duomo နှင့် Uffizi ပြခန်းနှင့် သိပ်မဝေးပါ။. ဤအံ့သြဖွယ်နေရာများသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု လမ်းလျှောက်သည့်အကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။, ထို့ကြောင့် သင်သည် လှပသော Florence လမ်းများနှင့် ရင်ပြင်များကို အလွယ်တကူ ဖြတ်လျှောက်နိုင်သည်။.
ထို့အပြင်, လမ်းအရမ်းမလျှောက်ချင်ရင်, ထို့နောက် Duomo နှင့် Giotto's Bell Tower ကိုတက်ခြင်းဖြင့် မြို့တစ်ခုလုံး၏ လှပသောရှုခင်းများကိုပေးသည်။. ဒါကြောင့်, မင်းရဲ့အားလပ်ရက်တွေကို မြို့လယ်ခေါင်မှာ Florence မှာ အလွယ်တကူ ဖြုန်းနိုင်တယ်။, စျေးဝယ်ခြင်းကြားတွင် သင်၏အချိန်ကို ပိုင်းခြားပါ။, အတတ်ပညာ, နှင့် ကြီးမြတ်သောအီတလီအစားအစာ.
French Riviera ၏သင်္ကေတ, Nice သည် သဲသောင်ပြင်ကြီးများနှင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် သာယာလှပသော ပင်လယ်ကမ်းစပ်မြို့လေးတစ်မြို့ဖြစ်သည်။. Nice သည် ပြင်သစ်တွင် အကျော်ကြားဆုံးမြို့များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။, ဒေသခံတွေရော ခရီးသွားတွေအတွက်ရော. ၎င်းသည် မြင့်မားသောရာသီများတွင် Nice ကို အနည်းငယ် လူစည်ကားစေနိုင်သည်။, ၎င်းသည် ပထမအကြိမ် ခရီးသွားများအတွက် ကောင်းမွန်သောတည်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။.
Nice သို့ ပထမဆုံးခရီးသွားသူများသည် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော လမ်းကြောင်းအတိုင်း du Paillon ကို ခံစားနိုင်သည်။, ရဲတိုက်ကုန်း သို့မဟုတ် မြို့ဟောင်းသို့. နေသာ, အသက်ဝင်သည်။, နှင့်လျှော့ပေါ့, Nice သည် ပြင်သစ်တွင် ပြီးပြည့်စုံသော အားလပ်ရက်ခရီးနေရာဖြစ်သည်။, ခရီးသွားတစ်ယောက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်တိုင်းကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါတယ်။. အရေးအကြီးဆုံးကတော့, နှင့် 300 တစ်နှစ်ပတ်လုံး နေသာသောနေ့များ, ကမ်းခြေမှာ အပန်းဖြေဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာကတော့ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အပန်းဖြေဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာပါပဲ။. သို့သျောလညျး, အနုပညာနဲ့ သမိုင်းကို စိတ်ဝင်စားရင်, Nice သည် Chagall နှင့် Matisse ပြတိုက်များဖြစ်သည်။, ရပ်ကွက်ဟောင်းလည်း ပါတာပေါ့။.
အမှုအရာတက် Sum မှ, Nice သည် သင်၏ပထမဆုံးခရီးစဉ်တွင် သင့်ကိုပျော်ရွှင်စွာ နှုတ်ဆက်နိုင်သောကြောင့် သင်၏ bonjour ကို ပိုလေ့ကျင့်ပါ။.
သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်: နွေရာသီ ဟုတ်ပါတယ်။.
Cannes မှ Paris ရထားများ
Cannes မှ Lyon ရထားများ
6. အကောင်းဆုံး ပထမအကြိမ် ခရီးသွားများ၏ တည်နေရာများ: ဗီယင်နာ
ဘုံဗိမာန်တွေနဲ့ ပြည့်နေတယ်။, ဘုရား, ရင်ပြင်ဟောင်းများ, Vienna သည် ပထမဆုံး ခရီးသွားများအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။. သြစတြီးယားမြို့တော်ကို ခြေလျင်လျှောက်ပြီး စူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။, ၎င်းသည် ဗီယင်နာကို ဥရောပရှိ လူသွားလူလာအလွယ်ကူဆုံးမြို့များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာစေသည်။. Inner Stadt မှ, ပြခန်းများစွာကို သင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။, ဇိမ်ခံစျေးဝယ်ဆိုင်များ, အားလုံးက Baroque စတိုင်ဖြင့် အထင်ကြီးပြီး သင့်ခေါင်းကို လှည့်ပတ်စေမည်ဖြစ်သည်။.
တစ်နည်းပြောရရင်တော့, ဗီယင်နာတွင် အံ့ဩစရာများစွာရှိသည်။ သမိုင်းဆိုင်ရာက်ဘ်ဆိုက်များ လည်ပတ်ရန်, ဗိသုကာလက်ရာက ထူးထူးခြားခြားပါပဲ။. သင်ဟာ သမိုင်းကို ချစ်မြတ်နိုးပြီး ကြွယ်ဝတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကို တန်ဖိုးထားတတ်သူပါ။, Vienna ကို မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိသွားလိမ့်မယ်။, ဗီယင်နာသို့ သင်၏ပထမဆုံးခရီးစဉ်သည် သြစတြီးယားရှိ ရက်ရှည်ပိတ်ရက်များစွာ၏အစဖြစ်သည်။.
သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်: ဆောင်းရာသီတွင် ဗီယင်နာသည် နှင်းများကျနေပြီး မှော်ဆန်နေချိန်တွင် အလှဆုံးဖြစ်သည်။.
ရင်ခုန်စရာ, စိတ်လှုပ်ရှားစရာ, လှသောအဆင်း, လူတိုင်းက Paris ကို မြင်မြင်ချင်း ချစ်မိသွားကြပါတယ်။, ဒါမှမဟုတ် ပထမဆုံးခရီးလို့ ပြောလို့ရမလား။. ပြင်သစ်မြို့တော်သည် အနုပညာဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။, ဖက်ရှင်, သမိုင်း, နှင့် gastronomy, အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရာများနှင့် လည်ပတ်စရာနေရာများကို ပေးဆောင်ပါ။, မည်သည့်အရသာနှင့်ဝါသနာအတွက်.
ပါရီမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် သင်လုပ်သမျှဟာ အမှတ်ရစရာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။. Champs-Elysees တစ်လျှောက် ပထမဆုံး လမ်းလျှောက်ခြင်းမှ Eiffel Tower ၏ ပျော်ပွဲစားပွဲနှင့် Louvre သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်း, ပါရီမြို့သို့ သင်၏ပထမဆုံးအကြိမ် ခရီးသွားခြင်းသည် မေ့မရနိုင်ပါ။. ပါရီသည် ဥရောပသို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ခရီးသွားများအတွက် အဆုံးစွန်သောနေရာဖြစ်သည်။.
8. အကောင်းဆုံး ပထမအကြိမ် ခရီးသွားများ၏ တည်နေရာများ: ရောမမြို့
လမ်းလျှောက်နေသည် cobbled လမ်းများ, Colosseum သို့, အချိုပွဲအတွက် အရသာရှိသော maritozzo သည် ရောမမြို့၏ ပထမဆုံးနေ့အတွက် အံ့ဖွယ်ဖွင့်ဆိုချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။. ထို့အပြင် ရှေးဟောင်းရောမမြို့၏ သမိုင်းဝင်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။, ဖိုရမ်နှင့် ဧကရာဇ်နန်းတော်ကဲ့သို့သော အထင်ကရနေရာများ, ရောမမြို့သည် Vino del Casa နှင့် အံ့သြဖွယ်အီတလီပီဇာများ စားသုံးရန် ကောင်းမွန်သောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။.
ထို့အပြင်, ရောမမြို့သည် အလွန်ရိုမန်တစ်ဆန်ပြီး အချစ်ရေးတွင် စုံတွဲများစွာကို ဆွဲဆောင်သည်။. စပိန်လှေကားထစ်များ သို့မဟုတ် Trevi စမ်းရေတွင်းများသည် ရိုမန်တစ်ဆန်သော ဓာတ်ပုံများအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာများဖြစ်သည်။. ဒါကြောင့်, အကယ်၍ သင်သည် အီတလီသို့ ဝေးဝေးသို့ ခရီးမသွားဖူးပါက၊, ထို့နောက် ရောမမြို့သည် ပထမဆုံး ခရီးသွားများအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။.
သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်: နွေဦးရာသီနှင့် ဆောင်းဦးရာသီတို့သည် ရောမမြို့သို့ ပထမဆုံးလာရောက်လည်ပတ်သူများအတွက် အလည်အပတ်လာရောက်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။. အီတလီက အရမ်းကောင်းတယ်။ ဥရောပရှိ ရာသီပိတ်ခရီး, ဧပြီလသည် သွားရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။.
ခရီးသွားခြင်းအနုပညာအတွက် တစ်ရက်သာရှိလျှင်, ဘရူဆဲလ်သည် အဆုံးစွန်သောနေရာဖြစ်သည်။. Waffles, ခြော့ကလကျ, ချောကလက်နှင့်အတူ waffles, မဟာနန်းတော်, Brussels တွင် လုပ်ဆောင်ရမည့် ထိပ်တန်းအရာသုံးခုဖြစ်သည်။, တစ်ရက်တည်းခရီးအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။.
မည်သို့ပင်ဆိုစေ, နည်းနည်းပိုကြည့်ချင်ရင်, ထို့နောက် Brussels သည် ကောင်းမွန်စွာ ဆက်နွှယ်နေကြောင်း တွေ့ရှိရခြင်းကို သင် ပျော်ရွှင်မိပါလိမ့်မည်။; ရထား, မက်ထရို, ဘယ်နေရာကိုမဆို ပို့ဆောင်ပေးမယ့် ဘတ်စ်ကားတွေပါ။. Brussels ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေတဲ့ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခု 12 ပထမအကြိမ် ခရီးသွားများ၏ တည်နေရာမှာ ဘာသာစကားမျိုးစုံသော မြို့ဖြစ်သည်။. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သင်အင်္ဂလိပ်စကားပြောဆိုနိုင်, ပြင်သစ်, Brussels တွင်ရှိသည့်အခါ ဒတ်ခ်ျ သို့မဟုတ် ဂျာမန်နှင့် ဘာသာပြန်ရာတွင် ပျောက်ဆုံးသွားမည်ကို စိတ်မပူပါနှင့်.
သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်: နွေရာသီနှင့် ဆောင်းရာသီသည် ဘရူဆဲလ်သို့ သွားရောက်ရန် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။. ဇွန်လ ပွဲတော်များသည် ဘရပ်ဆဲလ်တွင် ကောင်းသောလေထုကို ဖန်တီးပေးသည်။, ဒီဇင်ဘာသည် ခရစ္စမတ်၏ မှော်ဆန်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။.
10. အကောင်းဆုံး ပထမအကြိမ် ခရီးသွားများ၏ တည်နေရာများ: အသုံး
အငယ်, ချစ်စရာကောင်းသော Bruges မြို့သည် တူးမြောင်းများနှင့် ပြည့်နေသည်။, ဖက်ရှင်ဆိုင်များ, နှင့် အလယ်ခေတ်ဗိသုကာ. ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ဘယ်လ်ဂျီယံမြို့သည် ပိတ်ရက်တွင် ခရီးထွက်ရန် နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။, အပန်းဖြေအနားယူရန် အချိန်များစွာဖြင့်. Markt Square ရှိ ချောကလက်အရသာများအပြင်, မြို့ပြမြင်ကွင်းများအတွက် Belfry Tower ကိုတက်ခြင်းသည် Bruges ၏နေ့တစ်နေ့တာကိုစတင်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။.
Bruges အထင်ကရနေရာများကို ခြေလျင်လျှောက်နိုင်သည်။, ဒါမှမဟုတ် ရထားပေါ်မှာ, ပိတ်ရက်တစ်ခုမှာ. ထို့အပြင်, Bruges သို့ ခရီးကို အခြား ပထမဆုံး ခရီးသွား တည်နေရာများနှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ပါသည်။, ဘရပ်ဆဲလ်လိုပါပဲ။, ပြီးတော့ အဲဒါကို ဥရောပကို တစ်ပတ်ပြည့် ခရီးစဉ်ဖြစ်အောင် လုပ်ပါ။. ဒါကြောင့်, သင်၏ပထမဆုံး Bruges ခရီးစဉ်ကို အပြည့်အဝခံစားပါ။, အဆင်ပြေဖိနပ်ထုပ်ပိုး, လက်ဝါးကပ်တိုင်အိတ်, နှင့် မှော်ဆန်သော လျှပ်တစ်ပြက်များအတွက် ကင်မရာ.
သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်: နွေဦးသည် Bruges သို့လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။. ဒီနှစ်ဒီအချိန်မှာ, တူးမြောင်းများ နှင့် လမ်းသွယ်များ သည် ပန်းပွင့်များဖြင့် ပြည့်နေသည်။, နှင့်အရောင်များ.
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Cologne Cathedral သည် သင့်အား စကားမပြောနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။. သမိုင်းဝင်မြို့လယ်, ညနေခင်းတွင် မြို့မီးများ, နှင့် ဘုရားကျောင်းသည် ဤအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ဂျာမန်မြို့သို့ ပထမဆုံး ခရီးသွားမည်ကိုမဆို စွဲဆောင်စေသည်။. Cologne သည် အရေးကြီးသော အထင်ကရနေရာများအားလုံးကို သင်သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သောကြောင့် မြို့ပြအနားယူရန်အတွက် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။3ရက်ပေါင်း.
ဆောင်းတွင်းမှာ, မြို့တော်စတုရန်းသည် ဥရောပရှိ အကောင်းဆုံး ခရစ္စမတ် စျေးကွက်များထဲမှ တစ်ခုကို သင်ခံစားနိုင်သော နေရာဖြစ်သည်။. နွေရာသီမှာ, Rheinpark ဘုရားကျောင်းကို ရှုခင်းကောင်းကောင်းနဲ့ Rhine မြစ်ဘေးက ပျော်ပွဲစားထွက်ဖို့ သင်သွားနိုင်ပါတယ်။. ထို့အပွငျ, အံ့သြဖွယ်ပန်းခြံများပေါ်တွင် ကြီးစွာသောငွေစုခြင်းကို သင်ခံစားနိုင်သည်။, ပြတိုက်, နှင့် နောက်ထပ် Cologne ကတ်.
သွားရန်အကောင်းဆုံးအချိန်: တစ်နှစ်ပတ်လုံး, ဒါပေမယ့် အများစုကတော့ ခရစ်စမတ်နဲ့ နွေဦးရာသီတွေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။.
Dresden မှ Cologne ရထားများ
12. အကောင်းဆုံး ပထမအကြိမ် ခရီးသွားများ၏ တည်နေရာများ: အင်တာလာကင်
အယ်လ်ပိုင်းမြင်ကွင်းများ, အစိမ်းရောင်မြက်ခင်းပြင်, မြို့၏အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်အတူ ရေကန်များ, Interlaken သည် ဆွစ်ဇာလန်တွင် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။. မြို့၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်အတူ အဲလ်ပ်တောင်တန်းများနှင့် အနီးဆုံးတွင်ရှိသည်။, နေရာထိုင်ခင်း, နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် ၎င်းအား ပထမဆုံး ခရီးသွားများအတွက် အကောင်းဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်စေသည်။.
အကယ်၍ သင်သည် Interlaken သို့ ပထမဆုံးအကြိမ် ခရီးသွားရန် ရွေးချယ်ပါ။, သင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အလိုချင်ဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခုသို့ မမေ့နိုင်သော ခရီးတစ်ခု သွားရလိမ့်မည်။. တောင်တက်ခြင်းကို နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေ၊, Interlaken မှာ အားလုံးရှိတယ်။.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, ဤအရာများအတွက် သင်၏အားလပ်ရက်ကို စီစဉ်ရာတွင် ကူညီရန် ကျွန်ုပ်တို့ ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ 12 အကောင်းဆုံး ပထမခရီးသည်များ’ ရထားဖြင့်တည်နေရာများ.
ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ပထမဆုံးအကြိမ် ခရီးသွားများအတွက် အကောင်းဆုံးတည်နေရာ 12 ခု” ကို သင့်ဆိုဒ်တွင် ထည့်သွင်းလိုပါသလား။? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Fbest-first-time-travelers-locations%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
ဗြိတိန်နိုင်ငံခရီးသွားရထား, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား